DA-7 A3-Standard nhazi 1.Constant Height Head End na - eme ka njedebe dị elu na - enyere gị aka ịnweta ọsịsọ na mfe nke isi, olu na thorax. 2.Split Side Rails: 4pcs PP n'akụkụ ụzọ na-enye onye ọrịa nchebe ka ọ ghara ịda. Platform 3.Mezie ebe ana-adọpụ akwa: ikpo okwu Matress bụ phenolic resin bọọdụ nke nwere ike ịdị mfe iwepụ ma dịkwa mfe maka ịgba mmiri. Etu matraasi nwere ike ime X-ray maka azụ, ma mee ka ahụike onye ahụ nwee ntụsara ahụ. 4.Central Nọọsụ Njikwa S ...
DA-7 A2-Standard nhazi 1.Constant Height Head End na - eme ka njedebe dị elu na - enyere gị aka ịnweta ọsịsọ na isi ọwụwa onye isi, olu na thorax. 2.Split Side Rails: pzọ ihe ntanetị 4PP PP na-enye onye ọrịa nchebe na ndapụta yana 2 PC ọzọ n'akụkụ ụzọ n'akụkụ ụkwụ na-enye ọrụ nchekwa ọzọ ma na-enyekwa nkwado n'oge nguzo onye ọrịa. 3. Sistemụ Akara Ahịa: A na-echekwa ihe dị n'ime akwa akwa nke akpịrịkpa dị n'okpuru nkwụ ụkwụ pụọ na mmetụta ...
DA-7 A1-Standard nhazi 1.Split Side Rails: 4pcs PP n'akụkụ ụzọ na-enye onye ọrịa nchebe ka ọ ghara ịda, pcs abụọ n'akụkụ ụzọ abụọ n'akụkụ nso n'ụkwụ ụkwụ na-enye ọrụ nchekwa ọzọ ma na-enyekwa nkwado n'oge nguzo onye ọrịa. Sistemụ Akara Ahịa: A na-echekwa ihe mgbochi sistemụ akwa-ndina nke dị n’okpuru ụkwụ ya ka ọ ghara imetụta ya. Platform 3.Mapụnụ ebe a na-ete akwa bụ bọọdụ plastik nke nwere ike ịdị mfe iwepu ma dị mfe maka ịgba ọgwụ ...